MIUI 12 ụbọchị ntọhapụ zuru ụwa ọnụ bụ ọkwa gọọmentị | Gam akporosis
Xiaomi ekwuputala oge anyị ga-amata nke ọma na usoro nhazi nke ọhụụ, nke ga-abịarute MIUI 12, nke bụ onye doro anya ma doo anya nke ga-anọchi MIUI 11 nke a ga-enye ọhụụ ọhụrụ na ọtụtụ mgbanwe na ọrụ ọhụụ ahụtụbeghị na nsụgharị ndị gara aga.
A na-atụ anya nke ukwuu na MIUI 12 dị ka interface nke Xiaomi na Redmi phones. Anyị amaworị ọtụtụ nkọwa banyere nke a na izu ole na ole gara aga. Anyị akọwakwaala nke bụ ngwaọrụ izizi nke ndị nrụpụta China ga-enweta. Ugbu a, anyị abịala ebe a ikpughere ụbọchị mmalite nke ụwa, ozi nke ụlọ ọrụ ahụ ekpugherela awa ole na ole gara aga na ọ na-eme anyị ka anyị nwee obi ụtọ.
Nke a Mee 19 MIUI 12 ga-ebido n'ụwa niile
Ya mere, ọ bụ ma ọ bụ obere. MIUI 12 ga-eme ka ọ bụrụ onye ọchịchị ụwa niile na Mee 19, ụbọchị nke, n'oge a na-ebipụta isiokwu a, bụ ụbọchị ise. Nke a na - etinye anyị ihe na - erughị otu izu site na ịmara ọkwa nhazi nke ọhụụ na, dịka ọnụọgụ dị iche iche gara aga, ga-enye ọhụụ ọhụụ ọhụụ dị mma nke ga-azọrọ ya dịka otu kachasị mma, ihe Xiaomi na-anya isi banyere n'oge gara aga na ụdị ya gara aga.
Na ajụjụ, Emere ihe omume ntanetị maka ụbọchị ahụ na 8 PM GMT +8 ma bụrụ ebe a ga-ekwupụta njirimara niile nke MIUI 11 dịka o kwesiri., ọ bụ ezie na anyị amaraworị ụfọdụ nkọwa n'elu. Otu n'ime àgwà ya bụ ya Zuru oke ọchịchịrị, nke ga - eme ka ihuenyo belata, dabere na ọnụọgụ nke gburugburu. Maka nke a, ihe mmetụta ọkụ nke ọnụ ndị nwere ya ga-abụ onye ọkpụkpọ dị mkpa oge niile.
MIUI 12 ga-enwekwa ọnọdụ egwuregwu ka mma nke ga-anọchi Egwuregwu Turbo 2.0 maka nke ga-adịkwu irè. Nke a ga - emetụta arụmọrụ nke ogbugbu egwuregwu, yana ịnye ndị ọrụ ohere ngwangwa zuru oke nwere ọtụtụ ụzọ mkpirisi na ngwa na ọrụ ndị ọzọ.
N'ezie, nchekwa na nzuzo bụkwa otu n’ime isi ihe MIUI 12 kacha elekwasị anya. A katọrọ Xiaomi na ya mere Redmi n'oge gara aga maka ebubo a na-enyeghị ndị ahịa ha ihe nchekwa a na-apụghị ịgbagha agbagha, ihe abụrụla ụlọ ọrụ abụọ ahụ jụrụ ya, dị ka ndị a na-ebo ebubo na MIUI -n'ime ụdị ya niile- raara onwe ya nye ka ọ ghara imebi nzuzo nke ndị ọrụ ya ntakịrị. N'otu aka ahụ, onye na-emepụta ihe na China kpebiri imeziwanye ngalaba a na MIUI 12.
MIUI 12 ga-ejikwa AI kachasị nke ọma maka arụmọrụ ka ukwuu mgbe ị na-eme ọtụtụ ọrụ na ngalaba ndị ọzọ. A ga-ejikwa ya rụọ ọrụ vidio ọhụrụ dị iche iche, ịmegharị windo na-ese n'elu mmiri, emelitere ngwa nke aka ya na ụdị ntanetị ọhụụ, nhọrọ ndị ọzọ na ahụike, yana akwụkwọ ahụaja na ụda ọhụụ.
Xiaomi, izu ole na ole gara aga, kpughere na e nwere 66 ama ama ekwenyelarị ịnata ya site na June. Mgbe e mesịrị, a ga-agbakwunye ngwaọrụ ndị ọzọ na ndepụta ahụ, mana ndị ekwenyelarị bụ ihe ndị a:
Nwelite ndokwa maka June:
Nke abụọ ogbe nke mmelite:
Xiaomi Ngwakọta 2S
Xiaomi Mi 8 Ihuenyo Aka
Xiaomi Mi 8 Explorer mbipụta
Xiaomi Mi 8 Agba ndị ntorobịa
Xiaomi Redmi Rịba ama 8 Pro
Agba nke atọ nke mmelite:
Xiaomi Rịba ama 3
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MIUI 12 ụbọchị ịhapụ ụwa bụ ọkwa ugbu a
Kedu mgbe mmelite nke redmi note 8 pro Indian version ga-abụ
Mee ọ rụọ ọrụ Google Chrome Tab na Android